Uhulumeni uxwayisa abaphathi bamatekisi | Scrolla Izindaba
UNgqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula uphendule ngokukhushulwa kwemali yokugibela okwenziwa izinhlangano ezimbili zamatekisi aseGoli, exwayisa abaphathi bamatekisi ukuthi bengachuthi abagibeli babo.
UMbalula ukhiphe isitatimende ngeSonto kulandela umbiko we-Scrolla.Africa – “Ukukhuphuka kwemali yokugibela itekisi” – kanye nokuthi osomatekisi base-Alexandra bahlela ukuyikhuphula imali ngama-R30 uhambo ngalunye kusukela mhla zi-15 kuNhlangulana.
“UNgqongqoshe ufisa ukukhumbuza imboni yamatekisi ukuthi imithetho yamanje iyakuvimba ukuzuza inzuzo ngokungemthetho,” kusho isitatimende.
Abagibeli basenyakatho yeGoli kubathusile ukuzwa lokhu, abanye bathi izinhlangano zamatekisi azinandaba kanti abanye basola uhulumeni ngokungazisizi izinhlangano zamatekisi.
Ukukhushulwa kwemali yokugibela itekisi kumethusile uhulumeni futhi ukhathazekile.
UMbalula uthe bakubheke kakhulu ukukhuphuka kwemali yokugibela esanda kukhangiswa… kanye nokukhala kwabagibeli.
UNgqongqoshe uthe uyaqonda ukuthi imithetho yomvalelo yenze ukuthi ibhizinisi lamatekisi libe nzima, futhi wabacela ukuthi “bakhumbule labo abampofu” uma sebekhuphula imali.
Ngaphezu kokuxwayisa abaphathi bamatekisi ngokufuna ukwenza inzuzo kulesi sikhathi, uphinde wathi uzodlulisela ukukhuphuka kwemali yokugibela kwikhomishini yokuncintisana ukuze ihlole ukuthi ngabe “ilungile noma ifanelekile yini”.